प्रहरीको फन्दाबाट उम्केको युवा बेपत्ता भएपछि बाग्लुङ बन्द ! - Naya Online
प्रहरीको फन्दाबाट उम्केको युवा बेपत्ता भएपछि बाग्लुङ बन्द !
बिहिबार, जेष्ठ २५, २०७४ (June 8th, 2017 at 9:42am ) समाचार
बागलुङ, २५ जेठ ।
लागुऔषध बोकेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गर्न खोज्दा भागेर बेपत्ता भएका युवाको खोजी गर्न माग गर्दै पीडित पक्षले बिहीबार बागलुङ सदरमुकाम बन्द गराएका छन् ।
मङ्ग लबार राति बागलुङ–पर्वत सीमास्थल मालढुङ्गामा प्रहरीले नियन्त्रण प्रयास गर्दा फरार भएका बानपा–३ का १७ वर्षीय सुनिल पुन हराएपछि परिवार र आफन्तजन आन्दोलित बनेका हुन् ।